यसरी मनाइदिए अस्पतालमा नर्सहरूले मदनकृष्ण श्रेष्ठको सर्प्राइज जन्मदिन(भिडियो हेर्नुहोला) – Purba Aawaj
यसरी मनाइदिए अस्पतालमा नर्सहरूले मदनकृष्ण श्रेष्ठको सर्प्राइज जन्मदिन(भिडियो हेर्नुहोला)
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ३१, २०७८ समय: १६:४६:३४
वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठको जन्मदिन अस्पतालमा डाक्टर तथा नर्सहरूले मनाइदिएका छन्। आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा मदन कृष्ण श्रेष्ठले को’रो’नाले हामी सबैलाई रु’वा’उन सम्म रु’वा’यो भन्दै दु’ख व्यक्त गर्नु भएको छ।
उहाँले आज शुभदिन परेको भन्दै बर्षको तीन चोटि आफ्नो बर्थ डे परेको छ भन्दै मजाक पनि गर्नुभएको थियो।उहाँको पासपोर्ट र अन्य डकुमेन्टमा फरक पर्न गएको जन्मदिनको मितिको कारण उहाँले त्यसो भन्नुभएको हो। त्यसैगरी आजदेखी आफ्नो जन्मदिन भएकोले आफूलाई निको हुने विश्वास राख्दै आजबाट को’रो’ना म”र्‍यो भन्नुभएको छ। उहाँले को’रो’नाप्र’ती आ’क्रो’श व्यक्त गर्दै पा’पी,कु’लं’गा’र को’रो’ना भन्नुभएको छ।
उहाँले को’रो’ना’लाई जित्नुपर्छ,जितेको छु र सबैले जित्ने आशा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।सबैलाई राम्रो होस्,को’रो’ना भन्दै शुभेच्छा प्रकट गर्नुभएको छ। अस्प’ता’लमा भएका नर्सहरूले उहाँलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै खुसीयाली सेलेब्रेसन गरिदिएका थिए।
यसैसन्दर्भमा अ’स्पता’लमा जन्मदिन मनाउनको लागि मदन कृष्ण श्रेष्ठको परीवारका सदस्यहरू सर्प्राइज गर्दै अस्प’ता’ल पुगेका थिए। उहाँको जन्म दिनलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै मनाइएको थियो। मदन कृष्णको छोरी सारनाले मदन कृष्णको फेसबुक अकाउण्टबाट यस्तो पोस्ट सेयर गरेकी थिइन्।
आज अक्षय तृतीया , नेपाली तिथि अनुसार को दिन मा पर्ने हाम्रो बुबाको Birthday मा हामी परिवार सबै जना ड्याडी लाई वहाँ को जन्मदिन मा सामाजिक दुरी क़ायम राख्दै Medicity Hospital मा सर्प्राइज़ भिजिट गर्न गयौं।
Daddy को स्वास्थ मा सुधार आएको छ ! हामीलाई देखे पछि हाम्रो मन राख्न अझै फुर्ती पनी बढाऊनु भो।
यो भिडियोमा बुवा ले दिनु भएको message ले अबश्य पनि को’रोना संग ल’डी रहनु भएको सबैमा केहि न केहि सकारात्मक भावना अनि हौसला बढाऊन मद्दत गर्ने छ होला भन्ने आशा राखेका छौं !
मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई फेरि अ’स्प’ता’ल भर्ना गरिएको थियो । अ’क्सि’ज’न ले’व’ल’मा क’मी आएपछि उनलाई पुनः अ’स्प’ता’ल लगिएको थियो।आठ दिन अ’स्प’ता’ल’मा उप’चा’र’प’छि घर फर्किएका उनलाई भोलिपल्टै फेरि अ’स्प’ता’ल लगिएको उनकी छोरी सराना श्रेष्ठले बताएकी थिइन्।
“बुवा डि’स्चा’र्ज भएर घरमा एक रात मात्रै बस्नुभयो,” उनले भनिन्, “अ’क्सि’ज’न ले’व’ल ८४ मा झरेपछि भोलिपल्ट नै फेरि अ’स्प’ता’ल लग्नुपर्‍यो र अब अझै केही दिन अ’स्प’ता’ल’मा राखेर उप’चा’रमा बस्नुहुन्छ ।”मदनकृष्णलाई दोस्रोपटक अ’स्प’ता’ल भ’र्ना ग’रा’उ’न खोज्दा आफूहरुले स’मस्या भो’गे’को उनले सुनाइन् ।
“बुवालाई दोस्रोपटक अ’स्प’ता’ल भ’र्ना गराउन नि’कै गा’ह्रो भयो । हामीले ए’म्बु’ले’न्स’ला’ई बिहान १०ः३० तिर फोन गरेका थियौँ, आउँदा ३ः३० भइसकेको थियो,” उनले भमिन्, “कारण, बे’ड मिला’उन त्यत्रो समय लाग्यो । कति ठाउँमा कुरा गर्दा बल्ल मि’लेको थियो।
बुवाको लागि त बे’ड मिलाउन यस्तो गा’ह्रो भयो भने बाँकी स’र्वसाधारण अनि वि’पन्न व’र्ग’का लागि झन् कस्तो गा’ह्रो भ’इर’हेको होला, सम्झेरै ड’र लाग्छ ।”कलाकार श्रेष्ठको छातीमा सामान्य इ’न्फे’क्स’न देखिएकाले चि’कित्स’क’ले केही दिन अस्प’ता’लमै राखेर उ’प’चा’र गर्ने निर्णय लिएको सरानाले जानकारी दिएकी थिइन् ।
परिवारका बाँकी सदस्य छोरा यमन, बुहारी रिंकु र छोरी सरानाको स्वा’स्थ्यमा भने पहिलेभन्दा धेरै सु’धा’र भइसकेको उनले बताइएको छ ।“बुवाबाहेक हामी सबैलाई अहिले धेरै निको भइसक्यौँ । दोस्रो परीक्षण पनि गराउने सोचमा थियौँ । तर, बीचमै बुवालाई फेरि अ’स्प’ता’ल लग्नुपर्‍यो ।
त्यसैले अब केही दिनमा मात्रै दोस्रो परीक्षण गराउँछौँ । सम्भवतः मचाहिँ बुवालाई नि’को भएपछि मात्रै गराउने सोचिरहेको छु,” उनले भनिन् ।“को’रो’ना’सँग फा’इट गर्न सा’ह्रै गा’ह्रो हुनेरहेछ,” उनले थपिन्, “यसले कसैलाई पनि छोड्दैन । त्यसैले सबैजना सुरक्षित हुनुहोला ।”जटिल परिस्थितिमा साथ दिने सबैप्रति उनले आभार व्यक्त गरिन् ।
“यस्तो समयमा पनि हामीलाई खानेकुरा ल्याइदिएर हुन्छ कि, फोनमार्फत सन्चो/बि’सन्चो सोधेर हुन्छ कि, छरछिमेकी, साथीभाइ, आफन्तहरुले यति धेरै माया दिनुभएको देखेर एकदमै भा’वुक हुन्छु म त । हामीले यति धेरै माया पाउनुको कारण भनेकै बुवा नै हो ।”मदनकृष्ण हाल ललितपुरस्थित मेडिसिटी अस्प’ता’ल’मा अक्सि’जनको स’पोर्टमा छन् ।
यद्यपि, उनको स्वा’स्थ्य अवस्था’मा क्रमिक सु’धार भइरहेको सरानाले बताइन् ।पूरै परिवारलाई नै को’रोना सं’क्रम’ण भएको मदनकृष्णले वैशाख ६ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । उनीहरु हो’म आ’इसो’ले’स’नमा थिए । तर, छातीमा सा’मान्य स’मस्या देखिएपछि उनलाई पहिलोपटक वैशाख १० गते मे’डिसि’टी अ’स्प’ता’ल लगिएको थियो ।आठ दिनको उ’पचा’रपछि उनी घर फर्किएका थिए। सुदुर मिडिया बाट
Last Updated on: May 14th, 2021 at 4:46 pm
४६५ पटक हेरिएको